‘हामी एक भएमा विदेशी चलखेल हुन सक्दैन’ | Himalkhabar.com
गृहपृष्ठ » ‘हामी एक भएमा विदेशी चलखेल हुन सक्दैन’ ‘हामी एक भएमा विदेशी चलखेल हुन सक्दैन’
नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला समाधानको बाटो निस्कने कुरामा विश्वस्त छन् । १६–३१ असार २०६९ को हिमाल खबरपत्रिकाका लागि कुराकानी गर्दै उनले राजनैतिक निकासका लागि वार्ताको विकल्प नभएको बताए । उनले भने ‘देशलाई समाप्त पार्ने हो भने एउटा कुरा, होइन माया छ भने बाटो निकाल्नुपर्छ ।’ हिमालखबर शुक्रबार , १५ असार २०६९ १:३२ एम
अब चुनाव स्वीकारेर अघि बढ्न सकिंदैन र ? कांग्रेस चुनावबाट भाग्ने पार्टी त होइन ! कांग्रेस चुनावबाट डराउँदैन । हिजो त्यस्तो अवस्थामा पनि संविधानसभाको चुनाव कांग्रेसले नै गराएको हो । तर अहिले चुनाव हुने अवस्था छैन । निर्वाचन आयोगले नै अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन सम्भव नहुने बताइसकेको छ ।
कांग्रेस शान्ति प्रक्रियामा जति संविधानलेखनमा गम्भीर नभएकोले माओवादी यो हदसम्म गएको पनि भनिन्छ नि ? लडाकू समायोजन र हतियार नटुंगिएसम्म शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैनथ्यो, तर माओवादी संविधानलेखनलाई प्रभावित पार्न हतियार, सेना र शिविर आफ्नो नियन्त्रणमै राख्न चाहन्थ्यो । त्यही भएर शान्ति प्रक्रिया पहिले टुंग्याउनुपर्छ भनेर कांग्रेसले अडान राखेको हो । शान्ति प्रक्रियामा मात्र होइन, संविधानमा पनि माओवादीले आफ्ना कुरा जबर्जस्ती थोपर्ने प्रयास गरेको छ । हामी बहुलवाद भन्छौं, माओवादी नेताहरू कम्युनिष्टको शब्दकोशमै बहुलवाद छैन भन्छन् । यसरी माओवादीले जहाँ पनि बाधा, अड्काउ गरेर शान्ति प्रक्रिया लम्ब्याउने खेल खेलेको छ ।
संविधानसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्री भट्टराई पनि संसद् सदस्य हुनुहुन्न । यो अवस्थामा सहमतिका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिनुपथ्र्यो । उल्टो राष्ट्रपतिले बोलाएर ‘तपाईं कामचलाउ सरकार हो’ भन्नुपर्ने अवस्था आयो । माओवादीले जहाँ पनि जोरजबर्जस्ती गरेर पेल्ने काम गरेको छ । जिम्मेवार दलको नाताले कांग्रेस वार्ता, सहमति र सहकार्य अघि बढाउने कामको नेतृत्व गर्न तत्पर छ । मुलुकलाई द्वन्द्वमा जान दिनुहँुदैन । मुलुक इतिहासमै कमजोर भएको छ । यो अवस्थामा नयाँ ढंगबाट हिंड्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक छ, जसको नेतृत्व सहमतिकै आधारमा कांग्रेसले गर्नेछ ।
संविधानसभाको विघटनपछि कांग्रेसकै पहलमा दलहरूबीच संवाद शुरू भयो । कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ? माओवादी र यसका नेताहरू मुलुकप्रति साँच्चै चिन्तित छन् भने प्रक्रिया निश्चित रूपमा अघि बढ्छ । बेरोजगारी समस्या हल गरेर मुलुकको विकास निर्माण गर्न माओवादी साँच्चै प्रतिबद्ध हो भने यसको कुनै विकल्प छैन । मलाई विश्वास छ, माओवादीले अब छिट्टै यो कुरा महसूस गर्नेछ ।
ब्राजिल जानुअघि प्रधानमन्त्री भट्टराईले सहमतिपछि राजीनामा दिने भन्नुभएको थियो, त्यहाँबाट फर्केपछि त निर्वाचित सरकारलाई मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भन्नुभयो ! सबै सत्ता लम्ब्याउने खेल मात्र हो । माओवादीको भनाइ र गराइमा धेरै अन्तर छ । विस्तृत शान्ति सम्झैतादेखि हालसम्म भएका सहमतिको माओवादीले कहाँ पालना गरेको छ ? भनाइमा क्रान्ति र नयाँ नेपाल भन्ने अनि नेपाल र नेपालीप्रति प्रतिबद्ध नरहने त भएन नि !
कांग्रेस, एमाले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर ढोका खोल्नुस् भन्छन् । सहमति अनि राजीनामा भन्ने प्रधानमन्त्री निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरणको कुरा गर्नुहुन्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले के गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ? संविधानको संरक्षकका नाताले राष्ट्रपति विधि अनुसार हिंड्नुहुन्छ, उहाँले देश र जनताप्रति न्याय गर्नुहुन्छ । राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बनाउनुस् भन्न सक्नुहुन्छ ।
यो अवस्थाको पछाडि इतिहासमै नभएको वैदेशिक चलखेल भइरहेको छ भनिन्छ नि ? हामी कमजोर भयौं भने हाम्रो कमजोरीबाट विदेशीले फाइदा उठाउन खोज्ने हुन् । त्यसबाट सचेत हुनुपर्छ । विदेशी चलखेल हुन सक्दैन हामी एक भएमा ।
हिजो बीपी र जवाहरलाल नेहरूको सीधा कुरा हुन्थ्यो । तपाईंले बीपीसँगै युरोप गएर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बनाउनुभयो । तर आज त नेपाली राजनीति लैनचौरको गेटमा सीमित छ भन्छन् नि ? यो गलत कुरा हो । आज पनि हामीलाई भेट्न विभिन्न देशका राजदूतहरू आउने गर्नुहुन्छ । नेपालको शान्ति र संविधानबारे चिन्ता र चासो व्यक्त गर्नुहुन्छ ।
तपाईं सिद्धान्तनिष्ठ, इमानदार र त्यागी हुनुहुन्छ रे ! तर तपाईंको त्यो शैलीलाई पार्टी पंक्तिले आत्मसात् गरेको देखिंदैन । यसरी हेर्दा आफूलाई असफल भएजस्तो लाग्दैन ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । के राम्रो बाटो अवलम्बन गर्नु अनि आदर्शमा विचलित नहुनु मेरो कमजोरी हो ? त्यसो भए मसँग न पैसा छ, न केही । पार्टीका साथीले के देखेर मलाई सभापतिमा विजयी गराए त ? आजसम्म म सत्तामा गएको छैन । साथीहरूलाई केही दिएको छैन । तैपनि साथीहरूको माया पाएको छु । म असफल भएको होइन ।
तपाईं विकास निर्माणका कुरामा कार्यकर्तामा घुलमिल हुन सक्नुहुन्न र अव्यावहारिक हुनुहुन्छ हो ? झ्ूठो आश्वासन मैले कहिल्यै दिएको छैन । कार्यकर्ताका जायज काम गरिदिनु भन्दै आएको छु । तर तर्साएर म फलानो हुँ, मैले भनेको काम जसरी पनि गर्नै पर्छ भनेको चाहिं छैन ।
कार्यकर्ताको व्यावहारिक समस्या पनि बुझन नसकेको गुनासो छ त ? हो, व्यावहारिक हुन नसकेको भन्ने भनाइ केही हदसम्म सही होला । मैले बिहे गरेको छैन । परिवार पाल्नु परेको छैन । आटा, दालको भाउ पनि थाहा छैन । त्यसकारण अव्यावहारिक भन्नेमा केही सत्यता होला ।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सहयोगी रहनुभयो । तपाईंको काँधमा बन्दूक राखेर उहाँले धेरै पटक पड्काउनुभयो भन्छन् नि ? त्यस्तो होइन । उहाँ आफैं निर्णय लिने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । मैले मन्त्री नभएर पनि उहाँलाई निकै सहयोग गरेको थिएँ ।
विभाग गठन हुनसकेका छैनन्, केन्द्रीय समितिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि विजयीले पराजितलाई समेटेर जाने प्रणाली प्रजातन्त्र हो, तर तपाईंले सबैलाई समेट्न सक्नुभएन भन्नुहुन्छ । मैले कहाँ समेटिन ? शेरबहादुर, विमलेन्द्रजीलाई मनोनीत गरेर ल्याएको हुँ । साथीहरूको सहयोग र विश्वास शुरूमै पाउन नसक्नु दुर्भाग्य हो । विमलेन्द्रजीले किन त्यसो भन्नुभयो मैले बुझन सकिनँ ।
-१६–३१ असार २०६९ को हिमाल खबरपत्रिकाबाट
Leader without any vision and thoughts …
Date expired thotre leader … Youth need better opportunity …
So called youth are also like parsuram basnet
we need gagan thapa on your place ,plz step aside Mr koirala.
timi mula mulasag kaha thiyau yetinjel ni ahile aaya ra pani ghaito ma gham lageko chaina nepali congress ma. jindagi ta biheagarera gayo k nepal lai pani sambidhan na diyara jane bichar cha timi mula sag lai.
Hami eak vaye ma bideshi chalkhel huna sakdaina vanne kuro ta hami sabailai thaha vayekai kuro ho ni .tyo vani rakhnu pardaina bro eak vayera desh ko bikas garera dekhau.desh ko lagi kehi pani ramro kam garna sakdainou vane nakarai kan basa malai bore lagchha timi haru ko aadarsa ko kura sunda sunda